Tilmaamaha Dhacdooyinka Kaqeybgalka - Florida International Trade Expo
Hoos waxaad ka heli doontaa macluumaad waxtar leh oo ka jawaabi doona su'aalaha laga yaabo inaad qabtid ee ku saabsan Bandhigga Ganacsiga Caalamiga ah ee Florida.
Taariikhaha Expo iyo Saacadaha
Maxay yihiin taariikhihii Bandhigga Ganacsiga Caalamiga ee Florida?
Bandhigga Ganacsiga Caalamiga ee Florida wuxuu dhici doonaa laga bilaabo Talaadada, Maarso 16, 2021 illaa Khamiista, Maarso 18, 2021.
Waa maxay saacadaha munaasabaddu?
Saacadaha munaasabadu waa 9:00 subaxnimo ilaa 6:00 galabnimo Waqtiga Bariga (ET).
Barxadda dalwaddu waxay noqon doontaa mid la heli karo saacadaha bandhiga ka dib si ay u qaabisho booqdayaasha waqtiyada kala duwan. Waad booqan kartaa waabab waxaadna codsan kartaa kulanno lala yeesho carwooyinka xilligan.
Sideen U Galaa?
Gali cinwaanka emaylka aad ka diiwaan gashan tahay hoosta.
Gali lambarkaaga sirta ah. Tan waxaa la dejiyey intii hawsha diiwaangelintu socotay.
Sideen dib ugu cusboonaysiiyaa lambarkayga sirta ah madal?
Haddii aadan awoodin inaad xasuusato eraygaaga sirta ah guji guji xiriiriyaha "illoobay" ee ku yaal bogga galitaanka.
Ama tag https://expo.floridaexpo.com/forgotpassword. Xiriirinta ereyga sirta ah ee la iloobay ayaa ku weydiin doonta cinwaanka emaylkaaga oo waxaad u soo diri kartaa emayl leh xiriiriye lambarka sirta ah.
Ka waran haddii aan u baahdo inaan iska diiwaangeliyo naftayda ama qof kale oo ila shaqeeya?
Booqo https://www.floridaexpo.com/ inaad isdiiwaangaliso wakhti kasta! Diiwaangelintu waxay u furan tahay martida illaa Khamiista, Maarso 18-keeda 12:00 pm ET.
I caawi! Waxaan ubaahanahay taageero farsamo.
Fadlan email taageero@nextechar.com wixii caawimaad ah ee lagu xallinayo dhibaatooyinka websaydhka sida fiidiyowga kaydinta, dib-u-dejinta lambarka sirta ah, ama marinnada guud ee guud. Wixii taageero dhacdooyin guud ah, la xiriir floridaexpo@enterpriseflorida.com.
Ma heli doonaa xaqiijin mar la diiwaangaliyo?
Markii lagu guuleysto isdiiwaangalinta Expo, kaqeybgalayaasha waxaa loo weeciyaa bog "Mahadsanid Bog" waxayna hadda heli doonaan marin deg deg ah barxadda dalwaddii. E-mayl mahadsanid ayaa loo diri doonaa iyada oo ay weheliso isgaarsiin kale toddobaad kasta ka hor Expo diiwaangelinta ka dib.
Baadigoobka Madasha Inta Ay Socoto Dhacdadu (Waxaa laga heli karaa Maarso 16 - 18, 2021)
Sideen ula falgalaa dadka wax soo bandhigaya?
Waxay kuxirantahay soo bandhigaha waxaad arki doontaa dhowr ikhtiyaar oo aad kula falgasho. Si aad u booqato waab, ka dooro Exhibit Grand Hall dhinaca bidix ee bidix oo guji qolka aad rabto inaad daawato. Fiidiyowyo xusuus ah oo maqal Ingiriis ah leh ayaa xirxirey cinwaanada taageeraya lix luqadood: Carabi, Shiinaha, Faransiiska, Jarmalka, Boortaqiiska, iyo Isbaanishka
Sideen si dhakhso leh ugu heli karaa soo bandhigayaal xiise ii leh?
Hool kasta oo Grand Exhibition Hall ah, waxaad awoodi doontaa inaad ku raadsato magaca shirkadda, warshadaha iyo / ama erayga muhiimka ah.
Si toos ah ula sheekaysan karaa bandhigayaasha ka qayb galaya?
Haa. Qol kasta oo kaqeyb galaya waxaa kujiraa qolka lagu sheekeysto oo aad kuxiran karto. Marka laga reebo sanduuqyada lagu sheekeysto iyo daawashada fiidiyowga, halkan waxaa ku yaal siyaabo aad si toos ah ula falgeli karto wakiillada bandhig kasta:
INFO - Akhriso sharaxaad shirkadeed.
XIRIIR - Arag oo soo dejiso macluumaadka kaarka xiriirka.
NOLOSHA - Si toos ah ugu bood kulan toos ah oo fiidiyoow ah oo lala yeelanayo wakiilka shirkadda.
JADWALKA - Jadwal u samee ballanta hal-hal ah wakiilka shirkadda.
KHAYRAAD - Ka baro wax badan oo ku saabsan adeegyada shirkadda iyo waxyaabaha ay bixiso.
WAAN JOOGAY! - U sheeg soo-bandhigaha inaad joogtay qolkooda. Waababka qaarkood ayaa xitaa bixiya abaalmarinno dheeri ah oo loo yaqaan 'raffle' oo sidaas lagu sameeyo!
Miyaa la soo duubay bandhigyada websaydhka oo mar dambe ma awoodi doonaa inaan helo?
Haa. Qiyaastii 30 maalmood dhacdada ka dib, waad geli kartaa goobta oo waxaad daawan kartaa fiidiyowyo dalab ah, booqo waababyo lagu soo bandhigo, alaab soo dejiso, iyo in ka badan.
Ma weydiin karaa dadka hadlaa su'aalo inta lagu jiro bandhigyada webinar?
Haa, waxaan kugu dhiirinaynaa inaad su'aalo weydiiso inta aad soo bandhigayso oo dhan. Waxaa jiri doona Bar Su'aal oo laga heli karo shaashadda hoosteeda. Su'aalaha (Waqtiga la oggol yahay) ayaa laga jawaabi doonaa inta lagu gudajiro Su'aalaha iyo Jawaabaha dhammaadka ah.
Ma jadwal ula sameyn karaa shirkad shirkad ganacsi oo aan horay u sii qorsheeyay?
Haa, waxaan kugu dhiirigalineynaa inaad lashaqeysid bandhigayaasha oo aad codsato kulanno fool-ka-fool ah iyaga oo lala yeelanayo wadahadal shaqsiyeed. Si aad jadwal ugu samayso kulan hal-hal ah, guji astaanta Jadwalka taariikhda ee ku taal baalka buluugga ah ee hoosta qafis kasta oo raac tilmaamaha lagu bixiyo halkaas. Ikhtiyaarka jadwalka kulammada waxaa la heli doonaa inta u dhexeysa Maarso 16 - 18, 2021.
Ma soo dejisan karaa macluumaadka horjoogaha iyo waxyaabaha xayeysiinta ah?
Haa, waad soo dejisan kartaa dhammaan faylasha iyo kaararka e-ganacsiga ee aad rabto oo ku keydin kartaa qalabkaaga.
Muddo intee le'eg ayaan ku heli karaa barnaamijka munaasabadda?
Waxaad marin u heli doontaa barxadda iyo waxyaabaha ku jira OnDemand illaa 30 maalmood dhacdada ka dib. Barxadda dalwaddu waa la heli karaa saacadaha bandhiga ka dib si ay u qaabisho booqdayaasha waqtiyada kala duwan. Waad booqan kartaa waabab waxaadna codsan kartaa kulanno lala yeesho carwooyinka xilligan.
Waxaan kugu dhiirinaynaa inaad soo booqato Qolka Saxaafadda si aad u daawato war-saxaafadeedyada ka soo baxa shirkadaha soo bandhigaya wax soo saarkii iyo adeegyadii ugu dambeeyay.